Dugsiyo, dugsiyo xannaano iyo waxbarasho
Iswiidhan Ilmo walba oo u dhexeeya da,da sanad ilaa shan sano jir ah, wuxuu xaq u leeyahay inuu helo boos xannaano haddii waalidkood shaqeeyo, waxbarto, carruur kale uu guriga ku haysto,shaqo la,aan yahay, lacag jiro uu qaato, ama ay jirto baahi gaara oo xaalada qoyska la xidhiidhta.
Waxaa ku yaala degmada dugsiyo xannaano oo gaar loo leeyhay iyo kuwo ay degmadu maamusho. Haddaad jeceshahay dugsiyada xannaanada ee gaarka loo leeyahay adigu la xidhiidh. Cinwaanadooda iyo warbixintooda waxaad ka heli kartaa mareegta degmadda (Webside-ka degmadda). Ilmuhu waxay dugsiga xannaanada joogi karaan waqtiga waalidku shaqaynayo ama waxbaranayo ka bilaabata marka ilmuhu gaadho hal sano. Ilmahaan waalidkood shaqayn ama shaqo raadis yahay dhigan karaan dugsiga xannanada saddex saac maalinkii. Haddaadan shaqayn ama waxbaran wuxuu Ilmuhu aadayaa xannnaada lacag la,aanta ah laga bilaabo da,da saddex jir. Waa lacag la,aan 1 september ilaa iyo 31 maajo, inta badan 08:00 ilaa 11:00.
Laga bilaabo markaad codsiga dhiibateen waxaad boos helaysaan afar bilood gudahood. Haddaad booskaas aqbashaan waa inaad soo raacisaan caddeyn la xidhiidhta dakhliga reerka. Warqada waa inay ku yaalaan:
• Caddeynta mushaarka ama heshiiska shaqo haddaad shaqayso.
• Koobi (sawir) go,aanka CSN haddaad waxbarato
• Caddeyn ka soo qaad xafiiska Caymiska ( FK) haddaad qaadato gunno waxqabad ama lacagta waalidka.
• Caddeyn dhaqaalaha aad ka hesho qasnada dadka shaqo la,aanta ah
• Go,aan gunno la qabsiga waddanka ( etableringsersättning)
• Caddeyn ka soo qaad xafiiska arrimaha bulshada haddaad kaalmo masruuf qaadato.
Haddii uu isbedelo dhaqaalahaagu waxaa waajib kugu ah inaad isbedelkaas soo wargeliso xafiiska waxbarashada.
Dugsiga diyaargarowga waxbarasha
Iswiidhan Ilmuhu waxay dugsiga diyaargaroowga bilaabayaan da,da lix sano jirka. Dugsigaan waa fasal waxbarasho oo Ilmuhu ugu diyaar garoobayo bilaabida dugsiga hoose ee waxbarashada ass-aasiga ah. Laga bilaabo dayrta 2018 waa khasab in Ilmuhu aadaan dugsigaas.
Dugsiga hoose / dhexe (Grundskola)
Ilmaha da,da 7-16 sano waa khasab inay dhigtaan dugsiga hoose / dhexe. Carruurta ay waalidkood ku hadlaan luuqad aan ahayn Iswiidhish waxay xaq uleeyihiin inay helaan barashada afkooda hooyo. Magaalada Bollnäs waxaa ku yaala dugsiyo gaar ah iyo kuwo ay degmadumaamusho. Si aad u heshaan warbixinta bilaabida dugsiga ee ilmahiina la xidhiidha Lars Ahlström.
Madaxa qeybta afka hooyo
Dugsiga xilliga firaaqada waa mid kabaya, fasalka diyaargaroowga iyo dugsiga hoose / dhexe. Waxbarashada waxaa lagu casuumayaa laga bilaabo Gu,ga sanadka uu Ilmuhu 10 jirsado ama ka baxo fasalka 3 waa haddii uu waalidku shaqeeyo, waxbarto, ama ay jirto baahi gaara oo uu ardaygu qabo, xaalada qoyska awgeed.
Laga bilaabo dayrta uu ardaygu 10 jirsado waxaa degmadu ku casuumaysaa goobaha madadaalada ufuran bedelkii fasalka xilliga firaaqada.
Codsiga xannanada degmada, fasalka diyaargaroowga, fasalka xilliga firaaqada iyo dugsiga
Codsiga waxaa laga samaynayaa booska iskoolka (Skolplatsen). Codsigu waa iswiidhish waxaad galaysaa booska iskoolka, waxaadna u baahan tahay aqoonsiga elektarooniga ah / aqoonsiga bankiga ( e-legitimation/BankID). Waxaad caawinaad ka helaysaa shaqaalaha xafiiska waxbarashada.
Magaalada Hall, Stadshustorget 2, Bollnäs.
Dhallinyarta 15-18 jirka ah waxay aadayaan dugsiga sare. Dugsiga sare waa doorashada qofka (khasab maahan) ardayguna wuxuu dooran karaa inuu barto borogaraam xirfadeed ama borogaraamka diyaargaroowga jaamacada. Shahaadada (natiijada) dugsiga hoose / dhexe ayay ku xidhan tahay borogaraamka ardaygu baranayo. Haddii uusan ardaygu u qalmin bilaabida dugsiga sare waxaa jira waxbarasho gaar ah oo lagu diyaarinayo. Waxaa kale oo jira waxabarasho caalami ah oo loogu talo galay ardayda aan muddo dheer joogin Iswiidhan, oo aan dhamaysan fasalka 9, laakiin haysta shahaado dalkiisa hooyo. Barashada ciyaaraha ayaa loo raacinayaa ardayga raba inuu xooga saaro ciyaaraha.
Waxaa jira dugsiyo sare oo gaar loo leeyahay iyo kuwa ay degmadu maamusho.
Dugsiga sare ee Khaaska ah
Dugsiga sare ee khaaska ah waa doorasho xor ah, waxaana loogu talo galay dhallinyarta baahiyaha khaaska ah qaba. Dhanka qalbiga ama maskaxda. Waxaa jira waxbarasho dadka ka dhexeeysa iyo mid gaar ah, dhammaan ardayda dalka oo dhana waa lagu soo dhaweynayaa. Caafimaadka jidhka iyo kan maskaxdaba waa la tixgelinayaa. Waxaa kaloo jira fursad isboorti oo dheeri ah. Xitaa waxaad borogaraamka ku jira tababar xirfadeed.
Barashada luuqada ee dadka soo galootiga (SFI)
Dadka waa weeyn ee dhawaan wadanka yimid waxaa loogu talo galay barashada luuqada iswiidhishka (SFI). Haddaad ka weyn tahay 16 sano waxaad xaq uleedahaday inaad barato luuqada iswiidhishka, haddaadan haysan waxbarashada aas aasigaa ee iswiidhishka aanad ka diiwaangashan tahay degmada.
La xidhiidh la taliyaha xirfada iyo waxbarashada, warbixinta iyo codsiga (studie- och yrkesvägledare )
Waxbarashada dadka waaweeyn (Komvux)
Haddaad doonayso adigoo qof weyn ah inaad dhigato waxbarashada aas-aasiga iyo ama maadooyinka dugsiga sare waxaa laguu hayaa waxbarashada dadka waaweeyn. Maadooyinka gaadhka ah maahane, waxaad kaloo baran kartaa waxbarasho waqti dheer, tusaale ahaan waxbarasho la hubo oo dugsiga sare ah sida daryeelka iyo caafimaadka. Waxaa ku caawinaya la taliyaha xirfada iyo waxbarashada oo aad isla samaynayasaan qorshe waxbarasho,
Waxbarasho jaamacadeed (Högskola)
Waxaad dhigan kartaa koorsooyin jaamacdeed ama borogaraam buuxa oo aadan fasal tagayn, umana baahnid inaad guurto ama safarto. Waxaa lagaa caawinayaa qalabkii, qolalkii iyo fursadii aad wax kula baran lahayd dad kale. Kala xidhiidh la taliyaha xirfada iyo waxbarashada, warbixin ku saabsan codsiga jaamacadda.
Senast uppdaterad 29 augusti 2018 14:57